Warar Goos goos ah. Ruunkinet 30/11/2009
Guddoomiyaha maxkamadda sare oo la magacaabay & dastuurka dalka oo wax laga badalayo
Kullan ay yeesheen golaha wasiirada dowladda Soomaaliya, ayaa waxay ku magacaabeen guddoomiyaha maxkamadda sare ee dowladda iyagoo sidoo kalena ka dooday suurtagalnimada dastuur cusub oo uu dalka yeesho.
Guddoomiyaha ayaa waxa loo magacaabay Max'ed Faarax Indho Buur, waxana lagu war galiyay in uu isku diyaariyo howsha culus ee ay golaha wasiirada u igmadeen Md. Indha Buur.
Afhayeenka dowladda Soomaaliya C/xaaji Goobdoon, ayaa sheegay in kulanka oo uu hogaaminaayay wasiirka koowaad Cumar C/rashiid Cali ugu dambeyn ay isku raaceen golaha wasiirada in Indha Buur uu xilkaasi qabto.
Goobdoo, waxa uu intaas ku darray in ansaxinta golaha wasiirada ee guddoomiyaha maxkamadda sare dhawaan la hor geyn doono baarlamaanka Soomaaliya si ay iyana u ansaxshaan.
Maxkamadda sare ayaa qabata howlo ay ku jirto kala dhex galidda madaxda dowladda haddii ay isku qilaafaan arrimo quseeya sharciga.
Dhanka kale isla golaha wasiirada ayaa ansixiyay hindise dastuur cusub dalka loogu sameynaayo.
Wasiirka dastuurka iyo arrimaha federaalka Madoobe Nuunow Max'ed ayaa sheegay in dastuurkan cusub afti laga qaadi doono dadka dabadeedna lagu saleyn doono rabitaanka dadka, iyo waxyaabaha aan diinta Islaamka ka hor imaaneyn.
Madoobe Nuunow, ayaa yiri marka dastuurkan la sameeyo, waxa uu noqon doona mid meesha ka saaraya in awoodda dalka koox ama cid gaar ah heysata.
Soomaaliland oo xirtay xildhibaan dowladda Soomaaliya ka mid ah
Xildhibaan ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya, ayaa la sheegay in lagu xiray magaalada Laascaanood ee xarunta gobalka Sool halkaas oo uu ka jiro maamul hoos taga jamhuuriyadda la baxday Soomaaliland.
Xildhibaanka oo ka soo jeeda Laascaanood, ayaa la sheegay in uu u gaaray magaalada dhawaan si uu u soo booqdo qoyskiisa waxana xiray askar ka tirsan Soomaaliland.
Max'ed Maxamud Faarax oo ayaa waxa wararka qaar ay sheegayan in tagitaankiisa Laascaanood ay timid ka dib markii uu fasax ka helay maamulka ka jira magaalada laakiin markii uu halkaa gaarayna ay xireen ciidamada amaanka magaalada Laascaanood.
Wax war ah oo ka soo baxay dowladda KMG ah iyo maamulka Soomaaliland oo xarigan mudanahan, ayaanan wali jirin.
Ma ahan markii ugu horeysay ee mudane dowladda Soomaaliya ka tirsan lagu xiro dhulka ay Soomaaliland maamusho.
Itoobiyaan galay Gaalkacyo
Ciidamo Itoobiyaan ah oo aad u hubeysan ayaa la sheegay in ay gudaha u galeen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobalka Mudug, halkaas oo ay saakana fariisimo ka sameysteen ciidamada.
Wararka Gaalkacyo laga helaayo, ayaa waxay sheegayaan in ciidamada oo wata gaadiidka dagaalka ay ka soo tallaabeen dhinaca gobalka Galgaduud ee xadka dhulka Soomaalida Itoobiya.
Lama sheegin sababta ka dambeysa in ay ciidamadan hore u galaan gudaha degmada Gaalkacyo oo labada maamul ee Galmudug iyo Puntland kala maamulaan.
Waxan jirin war ka soo baxay saraakiisha maamuladaas ama kuwa Itoobiya toona.
Dad ku sugan Gaalkacyo ayaa sheegay inay ciidamada fariisin ka sameysteen agagaarka garoonka dayaaradaha ee degmada Gaalkacyo.
Alshabaab oo sheegatay in ay jiraan xoogag isku soo dhiibay dhinacooda
Alshabaab ayaa shegatay in tiro ka mid ah raggii kula dagaallamaayay gobalka Jubada Hoose ee Axmed Madoobe hogaaminaayay ay isku dhiibeen dhinacooda.
Sheekh C/fitaax Ibraahim Cali oo ah ku xigeenka warfaafinta maamulka Jubooyinka, ayaa sheegay in tirada isa soo dhiibtay ay gaarayaan 23 askar oo uu sheegay in ay ahaayeen dad la siray sida uu hadalka u dhigay.
C/fitaax, ayaa intaas ku darray markii ay wareysteen xoogagan isa soo dhiibay oo labadii maalmood la soo dhaafay ku sugnaa agagaarka degmada Dhooblay, ay ahaayeen dhuxullay iyo xoolaley lagau amray inay dagaalka galaan haddii kale ay gobalka isaga baxaan.
Ku xigeenka warfaafinta maamulka Kismaayo, ayaa waxa uu sidoo kale sheegay inay si wanagsan ula dhaqmi doonaan ragan isa soo dhiibay ayna rajeynayaan sida uu yiri in dadka kale ee la qadlay ay iyana waddadan ay mareen saaxiibadood ay mari doonaan.